၂၀၁၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အထွေထွေလုပ်သားများကို မူလတန်းဆရာ အတတ်စာပေးစာယူသင်တန်း ခေါ်ယူခြင်းမရှိကြောင်း မတ် ၂၃ ရက်က ပြုလုပ်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ ပညာရေးဝန်ကြီးက ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂) ရက် မြောက်နေ့မှာ သရက် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးကံမြင့်က ၁၇. ၃.၂၀၁ရ ၊ နိုင်ငံပိုင်ကြေးမုံသတင်းစာပါ အလုပ်ခေါ်စာအရ မူလတန်းစာပေးစာယူ သင်တန်း တက်ရောက်မယ့် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ဖြေဆို အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့ အထွေထွေလုပ်သားတွေကို သတင်းစာပါ အလုပ်ခေါ်စာ ကတိကဝတ်အတိုင်း မူလတန်း စာပေးစာယူသင်တန်း ခေါ်ယူရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမေးခွန်းနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီမှ စတင်၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ အရည်အသွေးရှိသော ပညာရေးစနစ်ကို ဦးတည်၍ ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အတွက် အထွေထွေလုပ်သားများကို မူလတန်းစာပေးစာယူသင်တန်း တက်ရောက်ရမည်ဟုပါရှိတဲ့ ၁၇. ၃.၂၀၁ရ ရက်နေ့မှာ ခေါ်ယူခဲ့သော ကြေးမုံသတင်းစာပါ အလုပ် ခေါ်စာမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အလုပ်ကြော်ငြာစာဖြစ်ပြီး အဆိုပါနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် အထွေထွေ လုပ်သားများအား မူလတန်းဆရာ အတတ်စာပေးစာယူသင်တန်း ခေါ်ယူခြင်း မရှိတော့ပါ ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် (Q-Sheet)အရ ကိုက်ညီမှုမရှိပါကြောင်းနဲ့ PPTT တက်ရောက်ခွင့်မရသော အထွေထွေ လုပ်သားများကို ဘွဲ့ရရှိပြီးပါက စာရေး(၁)ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ် ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါက PPTT တက်ရောက်ရန် ဝင်ခွင့်ယှဉ်ပြိုင်ဝင်ရောက် ဖြေဆိုနိုင်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။